Kiiska macaamiisha | Mashiinada dhismaha mashiinada beeraha ee Coyu, Ltd.
Boss Zhang wuxuu inbadan ka shaqeynayay warshadaha la taaban karo in kabadan 10 sano Gobolka Hebei. Wuxuu goob joog ka ahaa horumarka warshadaha la taaban karo bilowga isticmaalka fuulista tigidhada, isku darka, bambooyin jiidida, matoorrada dhulka iyo qalab kale ilaa hadda gawaarida waaweyn ee la taaban karo.
Bilowgii dhowr sano ka hor, wuxuu lahaa fikradda iibsashada gaari xamuul. Markii hore, in yar ayuu ka gaabsaday. Markii dambe, warshadii mashiinka dhismaha ayaa dib loo soo ceshaday. Boss Zhang wuxuu go’aansaday inuu bilaabo gaari yar oo bam-gacmeed ah. Ka dib markaan baaray oo quusiyay dhowr warshadayn oo gawaarida matoorka ah ee internetka, ka dibna baartey dhowr shirkadood oo warshado waaweyn oo matoorka matoorka ah isla goobtaas, ka dib markaan isbarbar dhigno dhinacyo kala duwan, waxaan shaki ku jirin inaan dooranno alaabada dhismaha beeraha iyo iibsashada gawaarida qaada 37 mitir.
Waxay qaadatay in kabadan hal sano in la soo gabagabeeyo dhismaha tareenka xawaaraha sare. Boss Zhang wuxuu aad ugu qancay gawaarida matoorka ee nongjian uumi gaar ah. Waxay ahayd mid ku habboon oo ku habboon in la isticmaalo, oo leh qalabyo fara badan iyo nolol adeeg oo cimri dheer.
Jiangsu, madaxa Chen, wuxuu ku iibsaday gaari xamuul oo 37 mitir ah gawaarida gaarka ah ee nongjian bilowga sanadkan.
Mr. Chen wuxuu ku hawlanaa shirkad ganacsi kireyn la taaban karo. Wuxuu hayaa gaari gacan labaad ah oo nooca uu isagu iibsaday ka hor. Sababtoo ah ballaarinta ganacsiga labadii sano ee la soo dhaafay, wuxuu doonayaa inuu iibsado gaari xamuul oo kale. Baadhitaan suuqa ka dib, wuxuu ogaaday in marka la barbar dhigo qaar ka mid ah gawaarida waaweyn ee waaweyn ee wax ku oolka ah, gawaarida matoorka ee nongjian gawaarida qaaska ah ay leeyihiin qiime sare, alaabo badan, nolosha adeegga oo dheer iyo faa iidada qiimaha.
Markii uu wacay 400-6290-698, wuxuu la xiriiray Nongjian Special Automobile Co., Ltd. markii dambe, oo uu weheliyey maareeyaha suuq geyntu, wuxuu u aaday shirkadda soo saaraha baarista duulimaadka isla markaana amar ku saaray goobta. Hadda waxaa la iibsaday nus sano. Xamuulkii matoorka ayaa adeegsaday. Dheecaanka ayaa xitaa. Khalad ma jiro. Tayada libaaxa.
Anhui, maamule Zhao, wuxuu adeegsan jiray qalab la taaban karo oo duug ah, oo aan waxtar lahayn oo ay dad badani leeyihiin. Badanaa waa inuu joojiyaa shaqada oo uu dadka ka dhigaa dayactirka tuubbada. Marka lagu daro khidmadaha dayactirka iyo mushaarka shaqaalaha, isagu ma kasban karo lacag badan.
Goor dambe, waxaan maqlay faa'idooyinka ay leeyihiin gawaarida matoorka yar ee taangiga yar, waxaana ku bilaabmay gaari xamuul oo qaada 33 mitir oo ah gawaarida khaaska ah ee beeraha. Boss Zhao wuxuu sheegay in gawaarida yar yar ee bamgareynta, oo isku xira isku-darka, bamgareynta iyo gaadiidka, ay aad u habboon oo habboon. Wuxuu soo iibsaday gawaarida bamka dhismaha ee beeraha mana u baahnayn inuu shaqaaleysto shaqaale aad u badan, laakiin waxay leedahay hufnaan badan oo shaqo iyo qaabab wadis fara badan. Waxaa la isticmaali jiray in kabadan laba sano hadda, mana jiro dhibaato weyn oo xagga kororka, matoorka iyo matoorka saliida. Qiimaha sidoo kale waa mid aad u adag.
Hunan, oo ah madaxa qoraxda, wuxuu leeyahay warshad isku-dhafan oo iskaa ah, inta badan wuxuu qabtaa dhismaha dhismayaasha miyi iyo magaalaba ama kaabayaasha.
Iyada oo warshadaha dhismaha mar kale kululeynayaan isla markaana ganacsigu korayo, wuxuu doonayaa inuu iibsado gaari kale oo bam-gacmeed yar yar oo leh shaqeynta isku-dhafka ah. Iyada oo loo marayo raadinta khadka tooska ah iyo la tashiga, baaritaanka si taxaddar leh garoonka, iyo isbarbar dhigga dhowr alaabo oo la mid ah, wuxuu go'aansaday inuu iibsado 30 mitir isku dhafan gawaarida matoorrada isku dhafan ee Nongjian Special Automobile Co., Ltd.
Intii lagu guda jiray kormeerka Nongjian Gawaarida Gaarka ah ee Co., Ltd., wuxuu si taxaddar leh u fahmay adeegsiga gaariga xamuulka. Wuxuu aad ugu qancay tayada iyo qiimaha gawaarida xamuulka qaada. Marka la barbar dhigo alaabada la midka ah ee soo saareyaasha kale, saamiga waxqabadka qiimaha ayaa aad u sarreeyay. Booska cad sun wuxuu aad ugu qancay gawaarida qashin qubka taas oo mideeysa gaadiidka, isku dhafka iyo matoorka.
Gawaarida matoorka gaarka ah ee Nongjian ayaa sidoo kale ku bilaabatay waqti, iyada oo darawallo waqti-buuxa ay u keenayaan gawaarida xamuulka Hebei waqtigii loogu talagalay, iyo Injineero iib ah kadib iibinta macaamiisha inay ka shaqeeyaan oo adeegsadaan xamuulka bamamka.
Shandong, madaxa Wang, wuxuu ku hawlanaa ganacsi la taaban karo in ka badan toban sano. Laga soo bilaabo bilowga waxoogaa dhaqdhaqaaqyo dabacsan ilaa shuruud ganacsi oo dambe, iyadoo qiimaha alaabtu sii kordhayo isla markaana uu haatan sare u kacayo, isla markaana qiimaha la taaban karo ee ganacsiga uu kor ugu kaco goorta uu taagan yahay, waxaan dareemayaa in meesha faa iidada ay sii yaraaneyso oo ay yaraaneyso.
Wuxuu had iyo jeer doonayay inuu helo aalad tartan badan oo lagu beddelo dadka ganacsatada ah. Waxaan aad u xiisaynayaa inaan kahelo asxaabta warshadaha la taaban karo ee ku saabsan isku dhafka gawaarida isku dhafan ee Nongjian Special Automobile Co., Ltd. Noocan gawaarida xamuulka ah waxay leeyihiin shaqo isku-dhafan oo ay si toos ah u bamgareeyaan, sidaa darteed uma baahna inay u tag iibiyaha si aad ugu qasto dhismaha, kaas oo dhaqaale ahaan.
Boss Wang wuxuu aaday warshad gaar ah oo ka shaqeysa dhismaha beeraha si loo sameeyo baaritaan faahfaahsan. Kaliya fahamka, miyuu ogaa in noocan oo kale ah isku dhafka gawaarida isku dhafan ee isku dhafan sidoo kale lagu xiriirin karo dhismaha dhuumaha oo si amar leh go'aan looga dhigo.
Guangxi, maamulaha, oo hadda dhistay xarun isku-darka, ayaa raba inuu iibsado laba gawaarida xamuulka qaada ee la taaban karo. Wuxuu wax ka weydiiyay badeecada xamuulka bamgare ee soo socda ee internetka. Isbarbar dhigga gawaarida gawaarida soo saarayaasha kaladuwan, wuxuu ogaadey inay jiraan qalab fara badan oo loogu talagay baabuurta matoorka gaarka loo leeyahay ee nongjian, tayada ayaa la dammaanad qaadayaa, qiimuhuna gaar ahaan waa mid ku habboon marka la barbar dhigo shirkadaha safka hore. Ka dib markii uu khadka taleefanka kula tashanayay, wuxuu u kaxeeyey Henan si uu u baaro goobta.
Markii aan imid baabuurta gaarka ah ee nongjian, waxaan arkay aagga warshada ee warshadaha ah iyo 70000 mitir murabac oo isweydaarsi wax soo saar ah, kaasoo gabi ahaanba ka duwanaa aqoon isweydaarsigaas yar oo kaliya qalab wax soo saar ah. Hal gaari booyad ah oo horey loo soo saaray ayaa la dhigay si habsami iyo nidaamsan. Waxaan aaminsanahay xoogga shirkadda, marka waxaan go aansaday inaan iibsado laba 37 gawaarida matoorka qaada isla goobta.
Henan, maamulaha Gao, wuxuu soo maray khasaarooyin badan mana uusan helin lacag badan markii uu bilaabay inuu ka shaqeeyo warshadaha la taaban karo. Goor dambe, ka dib soo dhoweynta saaxiib, waxaan imid baabuurta gaarka ah ee nongjian, waxaan booqday aqoon isweydaarsiga wax soo saarka, waxaan soo kormeeray heerka waxsoosaarka iyo tayada wax soo saarka ee shirkadda, waxaanan dareemay aad ugu qanacsanahay. Marka loo eego baahidiisa hadda jirta, maareeyaha Li ee nongjian gawaarida khaaska ah wuxuu ku taliyay inuu qaado baabuur qaada 30 mitir.
Boss Gao wuxuu moodayaa in nongjian ay tahay shirkad lagu kalsoonaan karo badeecadeeduna sidoo kale qanacsan yihiin. Marka sidaas ayaan ku saxeexay amarka buuxa ee isla goobta. Ku dhawaad ​​hal sano kahor iyo ka dib soo celinta qiimaha, sanadkaan isla markiiba wuxuu amar ku bixiyay gaari bamka qaada 33 mitir!
Gaariga yar ee bamamka soo saarey ee lagu dhisayo gawaarida khaaska ah ee beeraha wuxuu ku habboon yahay adeegsadayaasha kireysta, qarashkana waxaa laga soo kaban karaa hal sano. Tayada wax soo saarka ayaa la aamini karaa.
Shanxi, oo madax u ah Liu, wuxuu ku jiray meheradda qaybo ka mid ah qaybo ka horreeya. Suuq xumo awgeed, wuxuu ku qasbanaaday inuu ganacsigiisa beddelo. Baadhitaan suuqa ka dib, wuxuu ogaaday in rajada warshadda gawaarida xamuulka yar yar ay fiicneyd, sidaa darteed wuxuu go'aansaday inuu iibsado mid cusub oo ganacsigiisa bilaabo.
Saaxiibkiis ayaa u soo bandhigay inuu iibsado baabuurka matoorka gaarka ah ee nongjian. Maareeyaha iibka ayaa markii hore u kaxeeyay goobta dhismaha ee Gobolka Shanxi si uu u arko shaqada duulimaadka, iyo ka dib isaga oo u raacay wershadda si uu u kormeero garoonka. Wuxuu u maleeyey in gaariga weyn ee nongjian uu aad u fiicnaa, laakiin uusan awoodin lacag aad u badan xilligan. Dhismaha Beeraha ayaa sidoo kale siiyay isaga oo dejinaya qorshihiisa iibsiga gawaarida marxalado, hoos u dhac ku yimid oo kaliya 30%, iyo heerka dulsaarka asal ahaan la midka ah bangiga. Ganacsiga Boss Liu wuxuu ahaa mid wanaagsan. Wuxuu bixiyay qaybtii 2 sano kadib.